चन्द्र शमशेरको रोपवेदेखि चन्द्रागिरि केबलकारसम्म - Everest Dainik - News from Nepal
चन्द्र शमशेरको रोपवेदेखि चन्द्रागिरि केबलकारसम्म
केबलकार व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट प्रवर्धन नीतिको खाँचो देखिन्छ
चन्द्रागिरी, काठमाडौं ।
दाई हामी डेढ सय वर्षअघि पो पुग्यौं है ?” चन्द्रागिरि डाँडामा पुग्दा हेमन्तले भने । लोकसेवाको परीक्षा दिइरहेकोले उसलाई तिथीमिति कण्ठैजस्तो लाग्थ्यो इतिहासका ।
मलाई भने उसले के भनिरहेको छ, हेक्का भएन ।
चन्द्र शमशेरको रोपवे, मनकामना केबलकार, पर्वतको कुश्मा—बलेबा केवलकार र अहिले चन्द्रागिरी । चन्द्रागिरी तत्कालका लागि पर्यटनमा मात्रै सीमित भएपनि यसले सुदूर भविष्यमा केबलकारको विकास र त्यसबाट राज्य, जनता र व्यवसायीले लिन सक्ने लाभको सुदूर संकेत अवश्य नै गरेको देखिन्छ ।
“चन्द्र शमशेरले डेढसय वर्ष अघि येई डाँडोबाट हैन कार्गो रोप–वे ल्या’को ?” उसले यसो भन्दा बल्ल सम्झिएँ– ‘ए हो त है, चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्बत १९२२ मा घोर्शिङ—चिसापानी—चन्द्रागिरी पार गरी काठमाडौँसम्म २२ किलोमिटर कार्गो रोपवेसँग जोडेका थिए ।”
लेखक : रूद्रप्रसाद भट्टराई
“चन्द्र शमशेरको दूरदर्शिता त्यसपछिका शासकहरुले देखाउन सकेनन नि भाई, नत्र के के भइसक्थ्यो” मैले भने । यदि त्यही रोपवेलाई हवाई कार्गोकारुपमा विकास गर्न सकेको भए नेपाल जस्तो पहाडी देशमा यस्ता रोपवेहरु पहाड र मधेश जोड्ने, पहाड पहाड जोड्ने उत्कृष्ट सेतु हुँदैनथे र ? सँगै आन्तरिक पर्यटनले पनि उत्तिकै गति लिन्थ्यो ।
मनकामनामा केबलकार लिमिटेडले सन् १९९८ बाट १ हजार ३ सय २ मिटरको चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनकामना मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालन गरेपछि यसले समेत चर्चा पायो । केबलकार चढ्न भनेपछि मानिसहरु पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङबाट समेत झर्ने गर्थे मनकामना जान ।
तर पनि केबलकारलाई आर्थिकरुपमा व्यवसायका रुपमा, राजस्वका लागि पर्यटनका रुपमा र यात्राका लागि सहज र सस्तो हवाई मार्गका रुपमा न राज्यले सोच्यो न त व्यवसायीले नै ।
सगरमाथादेखि काञ्जिरोवा हिमालसँगै सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, तनहुँ मकवानपुर र चितवनका पहाडी क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिने यसको विशेषता बनेको छ ।
सन् २०१३ फेब्रुअरीबाट रोपवे र केबलकार प्रा.लि. ले पर्वत उद्योग वाणिज्य सँघको सहकार्यमा कुस्मा—बलेवा यान्त्रिक पुल कम्पनीको सहयोगमा ६०० मिटर लामो कुस्मा—बलेवा केबलकार सम्पन्न गरे । अहिले हजारबढी मानिसले यसबाट फाइदा लिएको बताइन्छ ।
चन्द्रागिरिको नवीन चर्चा
नेपालका डाँडाकाँडाहरुमा केबलकार व्यवसायिकरुपमा पर्यटन र यातायातका लागि ठूलो राहत बन्न सक्ने कुरा पछिल्लो समयमा स्थापना भएको चन्द्रागिरीले देखाएको छ । चन्द्र शमशेरको रोपवे, मनकामना केबलकार, पर्वतको कुश्मा—बलेबा केवलकार र अहिले चन्द्रागिरी । चन्द्रागिरि तत्कालका लागि पर्यटनमा मात्रै सीमित भएपनि यसले सुदूर भविष्यमा केबलकारको विकास र त्यसबाट राज्य, जनता र व्यवसायीले लिन सक्ने लाभको सुदूर संकेत अवश्य नै गरेको देखिन्छ ।
अहिले चन्द्रागिरि केबलकारले मात्रै लाखौं राजस्व सरकारलाई दिने क्षमता राख्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
सन् २०१६ मा चन्द्रागिरि हिल्सले अहिले पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा लोकप्रिय बनेको छ । राजधानीमा बढ्दो आबादीसँगै मासिँदै गएका पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्रमा नाटकीयरुपमा आन्तरिक पर्यटकहरुको वृद्धिलगायतका चुनौतीलाई यसले पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ । राजधानीमा बसेर राजधानी नै देख्न समेत नपाएकाहरुका लागि भालेश्वर महादेवको मन्दिर, ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राकृतिक सुन्दरता, मूर्तीचित्र, सुविधाजनक सत्कार, सहरको मनोरम दृश्यसँगै सस्तो मुल्यमा वस्तुको उपलब्धतालाई चन्दागिरी हिल्सले सहज बनाइदिएको छ । सगरमाथादेखि काञ्जिरोवा हिमालसँगै सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, तनहुँ मकवानपुर र चितवनका पहाडी क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिने यसको विशेषता बनेको छ ।
कहाँ हराए अरु योजनाहरु ?
नेपालमा केबलकारको सम्भावनाका बारेमा बेलाबखत अध्ययन भइरहने गर्छन् तर यसमा गम्भीरता भने देखिन्न । काठमाडौँ, फुलचोकी, खप्तड, रामारोशन, बढीमालिका, शुर्मासरोवर, सिद्धार्थ, बुटवल, मान्मा, कालिकोट, धुलिखेल, काभ्रे, स्वर्गद्वारी, प्युठान, रेसुङ्गा, गुल्मी, पोखरासँगै नयाँ केही सम्भाव्यता सम्पन्न नगरिएका पनि होइनन् । केही स्थानका काम अगाडि बढेका छन् भने अधिकाँश सुरु नै भएका छैनन् । आयोजनाको सुरुवातसँगै तिनको अन्त्यका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू, स्थानीय जनता कुनैपनि कारणले वाधा उत्पन्न नगराई समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ लागेको भए आज ती ठाउँको छनक् अर्कै भइसक्ने थियो ।
याे पनि पढ्नुस चन्द्रागिरि डाँडामा गगनले नभेटेका आफ्ना ज्वाइँ
गाउँ र सहरको विकासमा रोपवे तथा केबलकार ओखती सावित हुने महशुष गरिएपनि कार्यलाई गन्तव्यमा पु¥याउन सकिएन । फलत् हामी तुइनको जीवन जिउन वाध्य छौँ, पहाडमा चन्द्रागिरिको विकास सम्भव छैन भनेर काकाकुल बनेका छौँ । सँधै भूगोलको कठिनतालाई अनुभव गर्दै अभावको जीवनलाई साथ दिन पुगेका छौँ ।
यातायातको अत्यन्तै जटिल अवस्था भोगिरहेका छन् नेपाली जनता । तुईनको सकस यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले तुईन विस्थापनको कुरा गरे बेलाबखत, तर त्यसको विकल्प केबलकार हुनसक्नेतर्फ भने कमैको ध्यान गयो ।
केबलकार प्रवर्धन नीतिको खाँचो
केबलकार व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट प्रवर्धन नीतिको खाँचो देखिएको छ । नेपालका बिभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताको खोजी, त्यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव, त्यसबाट स्थानीय समुदायले लिनसक्ने लाभजस्ता विषयहरुमा व्यवस्थित अध्ययनका लागि राज्यको पहल आवश्यक भएको हो । यस्तो अध्ययनले यस प्रकारका योजनाहरुको वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको समेत वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन हुन सम्भव हुन्छ । यसका साथै राज्यले नै नीति निर्माण गरेर यसको व्यवसायिक पक्ष, लगानी र लाभांश जस्ता विषयमा समेत नीति निर्माण गरेर योजना निर्माण भइसकेपछिका विवादहरुलाई पहिला नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुन्छ ।
व्यवसायिकरुपमा केबलकारहरु स्थापना हुँदै जाने, त्यसमा जनताको स्वामित्व र सहभागितालाई राज्यका तर्फबाट नै सुनिश्चित गर्ने हो भने राजधानी उपत्यकाकाका डाँडाहरुले मात्रै करोडौं राजस्व देशलाई दिन सक्छन् । अहिले चन्द्रागिरि केबलकारले मात्रै लाखौं राजस्व सरकारलाई दिने क्षमता राख्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । एकातिर आम जनतामा आन्तरिक पर्यटनको बानी विकास हुनु, अर्कोतर्फ त्यसले लगानीकर्ता र राज्यलाई लाभ हुने अवस्था हुनु, स्थानीय जनतालाई यातायातको सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था नरहनुजस्ता सकारात्मक पक्षलाई हेरेर केबलकारलाई प्रवद्र्धन गर्न चन्द्रागिरी एउटा मोडेल अवश्य हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस जेष्ठताको चिता जलेपछि...
सामाजिक उत्तरदायित्वको खाँचो
पछिल्लो समयमा चन्दागिरी केबलकार स्थापनापछि त्यसको शुल्क र अन्य विषयमा विवाद देखियो । चन्द्रागिरि केबलकारले आन्तरिक पर्यटन र राजस्वमा दिन सक्ने योगदान भन्दा पनि यो विवाद उसले दिएका सुविधालगायतका विषयमा बढी केन्द्रीत थियो । कतिपय विवादहरु पूर्वाग्रही थिए भने कतिपयले केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठान गरेको देखिन्छ ।
यस्ता विषयमा सरकार र लगानीकर्ताहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढे यी विवादहरुले खासै अर्थ राख्दैनन् । स्थानीय समुदायलाई सब्सिडीदेखि प्याकेजका सुविधा र लाभांशको निश्चित प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने जस्ता कतिपय मोडेलहरु यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले चन्द्रागिरि हिल्सले खानपान, गुणस्तर र सरल मुल्यमा वितरण पक्षलाई पहिलो सर्त राखेर विभिन्न रुटमा निःशुल्क बसको सुविधा, विभिन्न चाडपर्वमा सुलभ प्याकेजले सेवाको शुरु गरेको जनाएको छ । यद्दपी यो कुरा सबै केबलकारको हकमा नीतिका रुपमा विकास हुन सके यसले केबलकारलाई अभियानका रुपमा विस्तार गर्न उत्प्रेरक वातावरणको निर्माण गर्न सक्छ ।
स्थानीय तथा केन्द्रको सेतु बनेको चन्द्रागिरिले काठमाडौं उपत्यकाबासीका लागि मात्रै होइन देशभरका मनोरञ्जनप्रेमीको मन जितेको छ । यसको स्थापनाले त्यस क्षेत्रका स्थानीयको आय आर्जनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । चन्द्रागिरी जस्तै अन्य विकटदेखि समथर क्षेत्रसम्म यो व्यवसायमा थप लगानी बढाउनैपर्ने देखिन्छ । आखिर चाहना हुँदा पहाडमा पनि सुविधायुक्त वस्तुको उपलब्धता गराउनसकिने कुरालाई शिरोधार गर्न मनकामना, कुश्मा यान्त्रिक र चन्द्रागिरीले सिकाएको छ । सबै पक्षबाट मतको भारी बोक्न सफल हुने देखिन्छ ।
ट्याग्स: chandragiri cable car, rudra prasad bhattarai